Izindaba - Kungani sithi i-gelatin ihlangabezana nezidingo zomhlaba wonke zokusimama?
Kungani sithi i-gelatin ihlangabezana nezidingo zomhlaba wonke zokusimama?
Eminyakeni yamuva nje, umphakathi wamazwe omhlaba ubhekele kakhulu ukuthuthuka okusimeme, futhi kwafinyelelwa ekuvumelaneni emhlabeni wonke. Uma kuqhathaniswa nanoma yisiphi isikhathi emlandweni wempucuko yanamuhla, abathengi bakhuthele kakhulu ekushintsheni imikhuba emibi ukuze bakhe umhlaba ongcono. Kungumzamo womuntu obhekiswe ekusetshenzisweni okusimeme futhi okunomthwalo wemithombo yomhlaba.
Ingqikithi yaleli gagasi lomthengi omusha onomthwalo wemfanelo ukulandelela kanye nokwenza izinto obala. Lokho kusho ukuthi, abantu abasenandaba nomthombo wokudla emlonyeni wabo. Bafuna ukwazi umthombo wokudla, ukuthi wenziwa kanjani nokuthi uyahlangabezana yini nezindinganiso zokuziphatha ezibaluleka ngokwengeziwe.
IGelatin iyasimama kakhulu
Futhi sekela ngokuqinile izindinganiso zenhlalakahle yezilwane
I-Gelatin uhlobo lwezinto zokusetshenziswa ezinemisebenzi eminingi enezici eziqhubekayo Into ebaluleke kakhulu nge-gelatin ukuthi ivela emvelweni, hhayi ukwenziwa kwamakhemikhali, okuhlukile kwezinye izithako eziningi zokudla emakethe.
Enye inzuzo imboni ye-gelatin engayinikeza ukuthi imikhiqizo ephuma phambili ekukhiqizeni inqubo ye-gelatin ingasetshenziswa njengokuphakelayo noma umanyolo wezolimo, noma ngisho nophethiloli, okuqhubeka nokukhuthaza umnikelo we-gelatin "emnothweni wokungasebenzi kwemfucuza".
Ngokombono wabakhiqizi bokudla, i-gelatin iyinto eluhlaza ehlukahlukene esebenza futhi eguquguqukayo, engahlangabezana nezidingo zokwenziwa okuhlukahlukene. Ingasetshenziswa njenge-stabilizer, thickener noma i-ejenti ye-gelling.
Ngoba i-gelatin inemisebenzi nezici ezahlukahlukene, abakhiqizi abadingi ukufaka ezinye izithako eziningi uma usebenzisa i-gelatin ukukhiqiza ukudla. I-Gelatin inganciphisa ukufunwa kwezithasiselo, okuvame ukuba namakhodi e-e ngoba akusiyo imvelo